Tsy hiovaova ny atiny raha tsy misy fiantsoana-hanao-hetsika | Martech Zone
Isam-bolana Martech Zone dia hiteraka firaketana vitsivitsy sponsorship, doka ary Consulting fahafahana. Raha mbola mitombo ny lazan'ny tranonkala, dia tsy nahita fitomboan'ny fitarihana manaraka izahay. Nahazo izany ihany aho tamin'ny farany - nandinika ilay tranonkala aho ary nandinika hoe taiza no nisy ny antso-nataonay. Zavatra iray izay jerentsika be dia be amin'ny mpanjifantsika izany, saingy tsy nahomby aho tamin'ny famerenako ny paikadinay manokana ho an'ny fiantsoana andraikitra tsara.
Misy fametrahana mahazatra 3 ho an'ny fiantsoana-to-hetsikao amin'ny pejy nomenao ao anatin'ny tranokalanao:
In-stream - ity no CTA mahery indrindra, ny fametrahana rohy, bokotra na sary mifandraika amin'ny atiny dia hanova ireo izay liana izay mamaky ny atiny nozarainao.
mifanila - ho hitanao ny CTA mavitrika sy mijanona eo akaikin'ny atinay. Nataonay antoka fa mifanila amin'ny sakafonay RSS izahay, ny tranokalanay ary ny rindranasa finday koa.
Site - ireo dia CTA ankapobeny mifandraika amin'ny vokatra sy serivisy atolotry ny orinasa anao. Rehefa manohy mamaky ny atiny ny olona dia maro no ho lasa liana amin'ny fomba hanampianao azy ireo… CTA manerana ny tranokala toy ny dokam-barotra lohateny sy footer.
Ny maningana, mazava ho azy, dia ireo pejin-tsainao. Ny pejy fitobiana dia tokony ho any amin'ny toerana haleha - tsy toerana ho an'ny CTA sy safidy hafa. Raha mijery pejy eo amin'ny tranokalanao ianao, moa ve ny pejinao namboarina tamina fiantsoana henjana-in-stream, mifanila ary manerana ny tranokala?
Mbola tsy vita isika, fa nampitombo ny isan'ny fitarihantsika hatramin'ny ~ 5 isam-bolana ka hatramin'ny 140 no mitarika isam-bolana. Fanatsarana ivelan'ny-chart izany! Ary tsy manova ny volan'ny olona mitsidika ilay tranonkala izahay. Tranonkala mitovy, atiny mitovy… fa a Fanatsarana 2,800% amin'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny fiantohana fotsiny fa misy antso-to-hetsika amin'ny atiny rehetra vokarinay. Tsy doka eny an-tavanao ireo doka manjelanjelatra… bokotra tsotra fotsiny, sary na rohy an-tsoratra mihitsy aza.
Tokony ho mora ny mahita antso-amin'ny-hetsika ao anaty ny atiny sy ny tranokalanao. Ny mpihaino anao dia tsy tokony hanontany tena momba ny hetsika mety hataon'izy ireo manaraka, matokia lazao azy ireo izay hatao manaraka. Raha lazainao azy ireo dia ho avy izy ireo.